Vanlọ Van Eetvelde | Akụkọ Njem
Onye na-ese ụkpụrụ ụlọ bụ Victor Horta wuru n'ime Belgium ụlọ nrọ nke ejiri ihe ọ bụla tụọ ihe n'ụzọ zuru ezu ruo n'ókè nke ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ kwekọrọ n'aka. Ewubere na njedebe nke narị afọ nke XNUMX ma mepụta n'ime Art nouveau (Oge a), ụlọ a na-agbaso ụkpụrụ nke mmeghari dị otú a, na-eji ihe dị iche iche (ma osisi, nkume, ígwè ma ọ bụ iko) n'ụzọ ọhụụ, na-eme ka ọtụtụ ohere ọ bụla dị.
Haslọ nwere aha a ebe ọ bụ na e wuru ya maka Baron Van Eetvelde ma mejuputara ala anọ. Nwa amadị a bụ onye ọrụ gọọmentị Belgium na ọ chọrọ ụlọ na ọnọdụ iji nabata ndị ọbịa ya na n'ihi nke a o wuru nke akwụkwọ akụkọ ọhụụ, okomoko na nkasi obi bụ njirimara bụ isi.
Igwe a rụpụtara arụ, osisi na iko nwere agba bụ isi ihe eji wuo ọmarịcha ihe owuwu a, nke nwere mosaics na ala, ụlọ elu mahogany na nke obere nkọwa dị ka radiators ma ọ bụ mgbachi ọnụ ụzọ mepụtara n'onwe ya. Horta na e lere ya anya dị ka onye na-ese ihe n'oge ahụ.
Ntughari trallada, nke na-echeta mmeghari nke ebili mmiri na-alọghachi n'onwe ya bụ otu n'ime leitmotifs nke ụlọ ma nwee ike ịchọta ya ụgbọ okporo ígwè, ọkụ ọkụ, ihe osise nke windo, kapeeti, ala ma ọ bụ na ihe osise osisi.
niile ụlọ Roomslọ ndị dị n'ụlọ ahụ, yana ụlọ iri nri na ime ụlọ ahụ jikọtara ya na nnukwu octagonal hall nke nwere ike bụrụ nke a kacha mara amara nke ime ụlọ a mara mma ị nwere ike ịga n'oge nleta gị na Brussels.
Ozi ndị ọzọ - Belgium na weebụ
Foto - Edilone / Peristilo
Isi iyi - zinglọ ndị mara mma (Philip Wilkinson)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Belgium » Vanlọ Van Eetvelde, na Brussels
Synlọ nzukọ ndị a ma ama nke ụwa